के पृथ्वीजस्तै छ त मंगल ग्रह ? – Rajdhani Daily
के पृथ्वीजस्तै छ त मंगल ग्रह ?
हामी सौर्य परिवारमा रहेका छौं । सौर्य परिवारमा रहेका नौवटा ग्रहहरुमध्ये पृथ्वीमा मात्र जीवन र वनस्पति रहेको छ । हालसम्मको अध्ययनमा अन्य ग्रहमा जीव र वनस्पति पाइएको तथ्य फेला परेको छैन । तर पृथ्वी पछिको जीव तथा वनस्पति हुनसक्ने आशंका गरिएको ग्रह भनेको मंगलग्रह हो ।
यो ग्रह पृथ्वीपछि सूर्यको नजिक रहेको ग्रह पनि हो । हेर्दा रातोरातो रङमा देखा पर्ने या ग्रहलाई रातो ग्रह पनि भनिन्छ । यो आकारमा पनि पृथ्वी जस्तै देखा पर्दछ । त्यसैले यो ग्रह जिज्ञासु मानिसहरु तथा वैज्ञानिकहरुका लागि चासो र आशंकाको ग्रह पनि बन्न पुगेको छ ।
पृथ्वीबाट गरिएका अन्वेषणहरुमा सबैभन्दा बढी यसै ग्रहका बारेमा गरिएको बताइन्छ । यो बाक्लो अन्वेषणको कारण मात्र एउटै हो– जीव तथा वनस्पतिको खोजी । खोजीका क्रममा हालसम्म पाइएका तथ्यहरुले पनि मंगल ग्रहलाई खोजीको ग्रह नै बनाएका छन् ।
मंगल ग्रहमा पहिले पानी थियो । तर हाल पाइएको भने छैन । यो ग्रहको सबै भागमा अन्वेषकहरुले अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । देखिएका र अन्वेषणका यन्त्रहरु अवतरण गरेका स्थानहरुको बारेमा मात्र केही सीमित अध्ययन भएको छ । अध्ययनमा विगतमा त्यहाँ पानी रहेको स्पष्ट संकेतहरु पाइन्छन् । हालैका अध्ययनमा सुकेका समुद्रका पिंध, ताल तलैया तथा पोखरीका पिंधहरु रहेका संकेतहरु फेला परेका छन् ।
अध्ययन गर्न र यन्त्रहरु पुग्न बाँकी रहेका स्थानहरुमा त्यहाँ अझै पनि जमेको पानी पाइनसक्ने संभावनाहरुलाई वैज्ञानिकहरुले अझै पनि आशा मारिसकेका छैनन् । यदि पानी भएको तथ्य फेला परेमा त्यहाँ केही न केही प्रजातिका जीव तथा वनस्पति रहन सक्ने संभावनालाई पनि नकार्न सकिदैन । पछिल्लो चरणमा मंगलग्रहमा देखापरेको विसाल सेतो भाग वैज्ञानिकहरुले पानी जमेको भाग हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । तथापि यो पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ ।
मंगल ग्रहमा पहिले निकै बाक्लो हावाको तह रहेको तथ्य फेला पारिएको बताइएको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार पछिल्लो अवधिमा त्यो ग्रहमा केही विपद आई व्यापक परिवर्तन हुन गई पहिलेको वायुको तह र प्रकार नष्ट भएको हुनुपर्छ । स्वयम् प्राकृतिक असन्तुलनका कारणले जीव तथा वनस्पतिमैत्री वातावरण नष्ट भएको हुन पनि सक्ने संभावनातर्फ पनि औल्याइएको छ ।
भौगोलिक बनावट हेर्दा पनि मंगल ग्रहको सतह पृथ्वीको जस्तो देखिन्छ । यसमा पनि पहाड, खोंच, तराइ, ज्वालामुखी क्रेटरका ठूला र डरलाग्दा खण्डहरु तथा उच्चसमस्थलीहरु देखिने गरेका छन् । उपत्यकाहरु पनि निकै संख्यामा साना र ठूलासम्म देखा पर्ने गरेका छन् ।
मंगल ग्रहका दुईवटा चन्द्रमाहरु रहने गरेका छन् । मंगलग्रहका बारेमा निकै रोचक कथाहरु र परिकल्पनाहरु पनि यस पृथ्वीमा पाइन्छन् । भनिन्थ्यो कि मंगल ग्रहमा जो पनि अन्तरीक्ष यात्री पुग्दथ्यो, उसलाई त्यहाँ गायब पारिन्थ्यो । शायद यो त्यहाँको चीसो वातावरणको कारणले पनि होला । त्यहाँ माइनस ४५ डिग्रीसेन्टिग्रेड तापक्रम रहने गरेको पाइएको छ । हावामा अक्सिजनको मात्रा भेटिएको पुष्टि भएको छैन । त्यसैले बरफ जमेको हुनसक्ने आशंका आशंकामा नै सिमित हुन पुगेको पनि छ ।
पहिले पहिले मंगलग्रहलाई पृथ्वीको अर्को चन्द्रमा भनेर पनि विश्वास गरिन्थ्यो । तर पछि अध्ययन र अन्वेषणसँगै त्यो सोंच र खोज गलत भएको प्रमाणित भयो । मंगलग्रहमा मिथेन ग्यास केही बढी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अहिलेसम्म अमेरिकी वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान संस्थान नासा मात्र यसमा बढी संलग्न भएकाले बाहिर ल्याइएका धेरै कुरा गफ र बढाएचढाइ मात्र पनि हन सक्छन् । यसको अन्य खोजबाट पुष्टि हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
Tags: मंगल ग्रह
मनसुनमा पनि जमिनभित्र छिरेन पानी, अझै सुक्खा छन् ढुंगेधारा
काठमाडौं। हरेक समस्याले ग्रसित राजधानीमा खानेपानीको समस्या नौलो
नेकपा विवाद, ओलीसँग असन्तुष्ट ...
१४ हजार पदमा लोकसेवा खुल्दै, खरिदारदेखि सहसचिवसम्म… (20,228)